အ၀လွန် အဆီများသူများအတွက် ဆေးကောင်းတစ်လက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အ၀လွန် အဆီများသူများအတွက် ဆေးကောင်းတစ်လက်
အ၀လွန် အဆီများသူများအတွက် ဆေးကောင်းတစ်လက်
Posted by manawphyulay on Jan 12, 2011 in News | 14 comments
မှန်ကန်သော ဆေးနည်းဖြစ်ကြောင်း ဦးစွာ ပြောပါရစေ။ အမျိုးသားကော အမျိုးသမီးပါ လွယ်ကူစွာ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးနည်းဟာ ငွေကုန်သက်သာတဲ့အပြင် လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းပါတယ်။ ရှောက်ရွက်နှင့် ရှောက်သီးရဲ့အခွံတွင် အဖိုးတန်တဲ့ အဆီဓာတ်တစ်မျိုး ပါရှိပါတယ်။ ထိုအဆီဓာတ်ဟာ လေရောဂါများ၊ အသည်းနှလုံးကို အဆီဖုံးခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အ၀လွန်သူများ၊ ဗိုက်ခေါက်ထူပြီး အလှပျက်အောင် ၀မ်းဗိုက်ရွှဲလာသော အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများအတွက် အလွယ်တကူ ဖော်စပ်သုံးနိုင်တဲ့နည်းကို တင်ပြလိုက် ပါတယ်။ ပထမ ရှောက်ရွက်ကြမ်းတွေကို အရင်ရှားထားပါ။ ပုလင်းတစ်လုံးစီတွင် ရိုးရိုးသကြား သုံးဇွန်း (ဟင်းစားဇွန်း) စီ ထည့်ရပါမယ်။ ပြီးရင် ပုလင်းတစ်လုံးစီမှာ ရှောက်ရွက်ကိုးရွက်စီ ထည့်ပေးပါ။ နောက် ရေကျက်အေးများ ပုလင်းထဲသို့ အပြည့်ထည့်ပြီး အဆို့ပိတ်ပြီး နေပူထဲ တွင် ကိုးရက်လှန်းပေးပါ။ ကိုးရက်စေ့လျှင် ထိုရှောက်ရွက်စိမ်ထားသော ပုလင်းများကို ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုလို့ ရပါပြီ။ နံနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ်တို့၌ အဆိုပါ ရှောက်ရွက်ဆေးရည် ပုလင်းကို လှုပ်ပြီး လက်ဖက်ရည်အကြမ်းပန်းကန်တစ်ဝက်ခန့်ကို မှန်မှန်သောက်သုံးပေးပါ။ တစ်လမှ နှစ်လခန့်ရှိသောအခါ အမျိုးသမီးများ ခါးသေးရင်ချီပြီး အဆီပို ဗိုက်ရွဲမှုများကျပြီး အသားအရေစစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီနည်းက အဆီကျဆေးတို့ ဘာတို့ စားခြင်းထက် စိတ်ချရတဲ့ မြန်မာရိုးရာ ဆေးနည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆေးရည်ကို မှန်မှန်သောက်သုံးပေးခြင်းကြောင့် အသည်းအဆီဖုံးခြင်းနှင့် နှလုံးအဆီပိတ်ခြင်းတို့မှလည်း သက်သာပျောက်ကင်းကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါ ရစေရှင်။
Thanks..i will use it.
oh …! really nice post indeed. i’ll copy it for my fatty (…).
ဒါကြောင့် မမက လှနေတာကိုး…
(ပုလင်းတစ်လုံးစီတွင် ရိုးရိုးသကြား သုံးဇွန်း (ဟင်းစားဇွန်း) စီ ထည့်ရပါမယ်။ ပြီးရင် ပုလင်းတစ်လုံးစီမှာ ရှောက်ရွက်ကိုးရွက်စီ ထည့်ပေးပါ။) လို့ရေးထားပါတယ်။
သိချင်တာက ပုလင်းရဲ့(အရွယ်အစား)ပါ။ ဘယ်လို အရွယ်အစားရှိတဲ့ပုလင်းမျိုးကို သုံးရမှာပါလဲ ဆိုတာကို ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါ။
ဟုတ်တယ်… ပုလင်းရဲ့အရွယ်ကိုသိချင်တယ်….ဒါမှကျွန်တော်လဲ သူများ ဆရာလုပ်လို့ရမှာလေ…ဟီး..ဟီး…
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လဲ ဘီယာတွေလိမ့်သောက်ပြီး ဗိုက်ကြီးပူနေလို့ ညစ်နေတာလေ….ဒီနည်းလေးမျှလိုက်ပါ့မယ်..
ပြီးရင်ထန်းဖိုထညက် ၁ ပိသာခန့်ကိုရေအနေတော်
အန်ကယ်ကြီး ပြောတဲ့ နည်းက ဟုတ်တယ်.. ၀မ်းမီးကောင်း လေကြေ အတွင်းအဆီကျ သွေးလေညှိတယ်။ ၀ယ်စားလို့ရတယ် အဲဒီ ရှောက်သီးချက်ဆေး ရွှေဘုံသာလမ်းက ပရဆေးဆိုင်ကြီးတွေမှာ ရတယ်။ အရင်က ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့ လူမမာ ရှိလို့ ၀ယ်ကျွှေးဘူးတယ်။ ဆေးညွန်းကတော့ ၉၆ပါး ရောဂါ ကောင်းသလိုဘဲ.. အမှန်တော့ ဓါတ်ဆာပေါ့. အစာလည်း ဆေး ဆေးလည်း အစာ.. မျှတအောင် စားသင်ပါတယ်။
ဆူး ရေ ဓာတ်စာပါကွယ် ဆာ ဆိုတာဗိုက်ဆာတာ
အန်ကယ်ကြီးရေ ကျေးဇူးပြုပြီး ထန်းဖိုဆိုတာ ကို မသိလို့ ရှင်းပြပေးပါ
lime leaves လို.ခေါ် တဲ. သံ ပ ရာ ရွက် ကော မ ရ ဘူး လား။ ချက် ကြီးေ၇ာက်နေ တဲ.နေ ရာ မှာ ရှောက်ရွက် မ ရှိ လို့ပါ။
်အဲဒီ အရည် က ရှောက်ရေ(ရည်) လိုပဲ ။ မေမေကိုတော့ အသက် ၆၀ ကျော်လာတော့ လေဖြန်းတာ ကာကွယ်တယ်ဆိုလို့လုပ်ပေး ဘူးတယ် ။ အတွင်းအဆီကျ ချင်ရင် ကြွက်နားရွက်မှိူလည်း ကောင်းတယ် ။ အသုတ်သုတ် စားပါရှင် ။(ဆီတော့ နဲနဲထည့်နော်)
ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်နေပြီးသောက်နေပြီ အဲဒီထဲမှာဖြူဖြူအဖတ်ကလေးတွေထွက်လာတယ်နော်…မှိုတက်သလိုဖြစ်တာလားပုလင်းကတော့ဝိုင်ပုလင်းနဲ့ လုပ်တာပါ